Ezekieri 39 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Gogi nemauto ake vanoparadzwa (1-10)
Kuvigwa muBani raHamoni-Gogi (11-20)
Kudzoswa kwevaIsraeri (21-29)
Mweya waMwari unodururirwa pana Israeri (29)
39 “Iwe mwanakomana wemunhu, profita pamusoro paGogi,+ umuudze kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri kukurwisa, iwe Gogi, jinda guru reMesheki neTubhari.+ 2 Ndichakutendeudza ndokutungamirira, ndoita kuti uuye uchibva kumativi ari kure kwazvo ekuchamhembe,+ ndokuendesa kumakomo eIsraeri. 3 Ndicharova uta huri muruoko rwako rweruboshwe hwodonhera pasi, uye ndichaita kuti miseve yawakabata neruoko rwako rwerudyi iwire pasi. 4 Uchafira mumakomo eIsraeri,+ iwe nemauto ako ese nemarudzi auchange uinawo. Ndichaita kuti uve chikafu cheshiri dzese dzinodya nyama uye chezvikara zvesango.”’+ 5 “‘Uchafira musango,+ nekuti ini ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 6 “‘Ndichatuma moto kuna Magogi nekune vaya vagere zvakanaka muzvitsuwa,+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha. 7 Ndichaita kuti zita rangu dzvene rizivikanwe nevanhu vangu vaIsraeri, uye handizoregizve richisvibiswa; uye marudzi achaziva kuti ndini Jehovha,+ iye Mutsvene muna Israeri.’+ 8 “‘Zvichatouya uye zvichaitika,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. ‘Iri ndiro zuva randakataura nezvaro. 9 Vagari vemumaguta eIsraeri vachaenda vobatidza moto vachishandisa zvombo zvinoti, nhoo diki* nenhoo huru, neuta nemiseve, netsvimbo dzehondo,* nemapfumo marefu. Uye vachazvibatidzisa moto+ kwemakore manomwe. 10 Havazotori huni kusango, kana kutsvaga huni mumasango nekuti vachabatidza moto vachishandisa zvombo zvacho.’ “‘Vachatora zvinhu zvevaya vaimbovatorera zvinhu, uye vachapamba zvinhu zvevaya vaivapamba,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 11 “‘Pazuva iroro ndichapa Gogi+ nzvimbo yemakuva muIsraeri imomo, mubani revaya vanofamba vachienda kumabvazuva kwegungwa, uye richavhara nzira inopfuura nevanhu. Imomo ndimo mavachaviga Gogi nemapoka makuru evanhu vake, uye vacharitumidza kuti Bani raHamoni-Gogi.*+ 12 Imba yaIsraeri ichaita mwedzi minomwe ichivaviga kuti ichenese nyika.+ 13 Vanhu vese vemunyika yacho vachava nebasa rekuvaviga, uye izvi zvichaita kuti vave nemukurumbira pazuva randichaita kuti ndikudzwe,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 14 “‘Pane varume vachasarudzwa kuti vagare vachitenderera nenyika yacho vachiviga zvitunha zvichasara panyika, kuti vachenese nyika yacho. Vacharamba vachitsvaga zvitunha zvacho kwemwedzi minomwe. 15 Kana vaya vanopfuura nemunyika yacho vakaona pfupa remunhu, vachaisa mucherechedzo pedyo naro. Vaya vanoita basa rekuviga zvitunha vachabva variviga muBani raHamoni-Gogi.+ 16 Uyewo imomo muchava neguta rinonzi Hamona.* Ivo vachachenesa nyika yacho.’+ 17 “Zvino iwe mwanakomana wemunhu, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Udza shiri dzemarudzi ese nezvikara zvese zvesango kuti, “Unganai, muuye. Unganai pachibayiro changu chandiri kukubayirai, chibayiro chikuru mumakomo eIsraeri.+ Muchadya nyama uye muchanwa ropa.+ 18 Muchadya nyama yevane simba uye muchanwa ropa remachinda epanyika, izvo zvipfuwo zvese zvakakodzwa zvekuBhashani zvinoti makondohwe, makwayana, mbudzi uye mikono yemombe. 19 Muchadya mafuta kusvikira maguta pachibayiro chandichakugadzirirai uye muchanwa ropa kusvikira madhakwa.”’ 20 “‘Muchadya vatyairi vengoro nemabhiza patafura yangu, uye muchadya vanhu vane simba nemhando dzese dzevarwi kusvikira maguta,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 21 “‘Ndichaita kuti marudzi aone ukuru hwangu, uye marudzi ese achaona kuti ndaita zvandakaatongera uye kuti ndaratidza simba rangu pakati pawo.+ 22 Kubva zuva iroro, vanhu veimba yaIsraeri vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo. 23 Marudzi achaziva kuti vanhu veimba yaIsraeri vakatapwa nemhaka yekutadza kwavo, nekuti vakanga vasina kutendeka kwandiri.+ Ndokusaka ndakavavanzira chiso changu,+ ndikavaisa mumaoko evavengi vavo,+ uye vese vakaurayiwa nebakatwa. 24 Ndakavaitira zvinoenderana nekusachena kwavo uye zvinoenderana nekutadza kwavo, uye ndakavavanzira chiso changu.’ 25 “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichadzosa vanhu vaJakobho+ vakatapwa ndonzwira imba yese yaIsraeri tsitsi;+ uye ndichashingaira pakurwira zita rangu dzvene.+ 26 Kana kunyadziswa kwavo nemhaka yekusatendeka kwavo kwese kwavakandiitira kwapera,+ vachagara munyika yavo vakachengeteka, pasina anovatyisa.+ 27 Pandichavadzosa kubva kune mamwe marudzi, ndovaunganidza kubva kunyika dzevavengi vavo,+ ndichazvitsvenesawo pakati pavo, marudzi mazhinji akatarisa.’+ 28 “‘Vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo, pandichaita kuti vatapwe nemamwe marudzi, ndobva ndavadzosa kunyika yavo, pasina wandinosiya.+ 29 Handizovavanziri chiso changu,+ nekuti ndichadurura mweya wangu paimba yaIsraeri,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”
^ Nhoo iyi yaiwanzotakurwa nevanopfura neuta.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “netsvimbo dzine muromo wakapinza.”
^ Kana kuti “Bani Remapoka Makuru Evanhu vaGogi.”
^ Kureva kuti, “Mapoka Makuru Evanhu.”